प्रधानमन्त्री कपको उपाधि एपिएफलाई | mulkhabar.com
June 12, 2018 | 12:00 pm 111 Hits
काठमाडौँ । विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) ले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पराजित गरी प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितको उपाधि हात पारेको छ ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा आज भएको फाइनल भिडन्तमा एपिएफले आर्मीलाई ६ विकेटले पराजित गरेको हो । आर्मीले दिएको २१० रनको लक्ष्य एपिएफले ४१ दशमलव २ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर भेट्टायो । यता समूह चरणको खेलमा भने एपिएफ आर्मीसँग पराजित भएको थियो । उपाधिसहित एपिएफले रु २० लाख प्राप्त ग¥यो ।
त्यस्तै उपविजेतामा चित्त बुझाएको आर्मीले १० लाख पायो । टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित ५० ओभरमा सबै विकेट गुमाएर २०९ रनको योगफल बनायो । आर्मीका लागि भीम सार्कीले ४५ रन बनाए भने सोमपाल कामीले ३६, कप्तान विनोद भण्डारीले ३५ तथा राजेश पुलामी मगरले २७ रन जोडे ।
बलिङतर्फ एपिएफका करण केसीले एक्लैले ३ तथा वसन्त रेग्मी र भुवन कार्कीले २÷२ विकेट लिए । दुई सय १० रनको लक्ष्य पछ्याएको एपिएफको जीतमा अनिल शाह र प्रदीप ऐरीले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे । शाह र ऐरीले ६३÷६३ रनको योगदान दिए । त्यस्तै सुवास खकुरेलले १४, पृथु बाँस्कोटाले ३२, रोहितकुमार पौडेलले १५ तथा करण केसीले पनि समान १५ रनको योगदान दिए ।
राजनीतिview all	प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको नियुक्ति किन बिवदित बन्यो? यस्तो छ कारण
किन मागे प्रधानमन्त्री ओलीले राजपासँग सात दिनको म्याद?
कम्युनिस्ट सरकारविरूद्व लड्न तयार हाेअाैैं- देउवा
अन्तरवार्ता / बिचारview all बिचाैलियाले कसरी बिगारे माअाेका बाउछाेरीकाे सम्बन्ध ? (सनसनीपुर्ण खुलासा)
मन पर्याे भन्दैमा अाची पनि बास्ना अायाे भन्ने ?
जलवायु परिवर्तनमा गुफाडाँडापछिकाे कार्यभार